Aza avela hiala amin'ny famonoana olona i Cigna | Martech Zone
Sabotsy, Desambra 22, 2007 Sabotsy, Desambra 22, 2007 Douglas Karr
Mandria am-piadanana, Nataline.
Raha mbola tsy nolavina tombony ianao, alefa amin'ny fiantohana fiantohana, na henonao olona manana izany - olona tsara vintana ianao! Ny indostrian'ny fiantohana dia iray amin'ireo tombony be indrindra any Etazonia. Tsotra ny matematika, arakaraka ny habetsahan'ny olona avelany ho faty - no tsara kokoa ny tombony.
Azontsika ovaina ve ity miaraka amin'ny Internet sy tontolon'ny bilaogy? Azontsika atao ve ny manapoaka baomba ara-bakiteny ireo hafatra amin'ny Cigna Sucks ary manisy fiovana? Nambaran'izy ireo fa eo amin'ny sehatry ny fikarakarana izy ireo. Marina ve izany? Moa ve ny fikarakarana tsy mandany vola be noho ny tsy miraharaha? Mino aho fa miahy ny dokotera, fa ny orinasan'ny fiantohana kosa dia manana insentif mifanohitra amin'izany.
Tao amin'ny taratasy iray tamin'ny 11 desambra, dokotera efatra no niantso ny mpiantoka hihevitra indray. Nilaza izy ireo fa ny marary amin'ny toe-javatra mitovy amin'izany izay miaina ny transplantants dia manana taham-paharetana enim-bolana eo ho eo amin'ny 65 isan-jato.
Nilaza i Cigna fa fanandramana io fa tsy saron'ny politikany.
Maty izao i Nataline Sarkisyan taorian'ny telo taona niadiana tamin'ny leukemia ary nolavina ny famindrana ilaina avy amin'ny orinasany Insurance, Cigna.
Tsy izany fotsiny fa famonoana olona voalohany eo imasoko. Ny mpampiasa iray mamoy mpiasa iray noho ny toe-draharaha tsy milamina dia azo enjehina amin'ny famonoana olona na fanamelohana ho faty tsy maninona, maninona no tsy azo atao ny Orinasa fiantohana? Tsy niraharaha ny toe-javatra i Cigna, nandinika izany izy ireo ary nanapa-kevitra ny hamela ilay marary ho faty.
Sady tezitra no mampatahotra ahy ireo tantara ireo. Raha manana stock ao Cigna ianao na koa Mutual Fund izay manana Cigna ao anaty mix, dia manentana anao aho tsy hanohana orinasa toy izany. Fotoana nialan'ny orinasam-piantohana amin'ny filaharan'ny ran'ireo olona mandoa azy ireo.
Bebe kokoa momba ny tolona Nataline:
Nodimandry i Nataline, menatra an'i Cigna
Novonoin'i Cigna i Nataline
Maty i Nataline
Ekipa Mpanatanteraka Mpanatanteraka CIGNA - ahoana no fatorianao amin'ny alina ?!
H. Edward Hanway, Filoham-pirenena sy Lehiben'ny mpanatanteraka, CIGNA Corporation
Michael W. Bell, Filoha lefitra mpanatanteraka ary lehiben'ny tompon'andraikitra ara-bola, CIGNA Corporation
David M. Cordani, Filoha, CIGNA HealthCare
Paul E. Hartley, Filoha, CIGNA International
John M. Murabito, Filoha lefitra mpanatanteraka, Human Resources and Services, CIGNA Corporation
Carol Ann Petren, Filoha lefitra mpanatanteraka ary mpanolotsaina jeneraly, CIGNA Corporation
Karen S. Rohan, Filoham-pirenena, fiantohana vondrona CIGNA ary filoham-pirenena, CIGNA Dental & Vision Care
Michael D. Woeller, Filoha lefitra mpanatanteraka ary Lehiben'ny tompon'andraikitra amin'ny fampahalalam-baovao, CIGNA Corporation
Tags: mpanoratraData VisualizationGlobal MarketingJascha Kaykas-WolffMindjetfikambanana
Hehy mahatsikaiky ny sasany… Ny sotro sy ny kofehy
Dec 22, 2007 ao amin'ny 12: PM PM
Doug: Vao avy nijery ny “Sicko” aho omaly. Mampatahotra.
Dec 22, 2007 ao amin'ny 2: PM PM
Ny ampahany mampatahotra ahy dia izao fotsiny: ny orinasam-piantohana eto amin'ity firenena ity dia manana fahefana handà ny filazana fa manizingizina ny dokotera fa hanalava na hitahiry fiainana.
Ny orinasa iray manapa-kevitra amin'ny fiainana na ny maty dia tokony ho tsy ara-dalàna. Tsotra sy tsotra.
Dec 22, 2007 ao amin'ny 6: PM PM
Eny, mampatahotra, saingy efa elaela io no marina. Somary mahatsikaiky ny zava-nitranga iray manontolo: tsy maintsy maty ny olona sasany satria tsy tonga ny taova mpanome. Eto isika dia toa nanana tranga izay nisy iray, ary tsy azony izany.
Na azo inoana kokoa fa afaka nanana izy, fa avy eo ny sisa amin'ny fianakaviany dia mety tsy maintsy nivarotra pensilihazo teny amin'ny arabe rehefa may ny fananany. Izay no antony niheveran'izy ireo fa manana fiantohana izy ireo. Misy zavatra tsy mety amin'ity sary ity…
Dec 22, 2007 ao amin'ny 7: PM PM
Tsara ny mahita anao eto ary manantena fa mandeha tsara ianao.
Manantena aho fa azontsika ampiharina ny fanerena ilaina mba hametrahan'ny mpanao lalàna antsika ny fikarakaran'ireo marary any amin'ny toerana misy azy - miaraka amin'ny dokotera fa tsy ny orinasa fiantohana.
Ny olana dia miankina amin'ny TSY mahazo tombony ny orinasa farany fiantohana ara-pahasalamana. Ity no nifanena tamiko rehefa nanandrana nankasitraka ny fitsaboana ny zanako lahy. Nahazo fankatoavana ho an'ny Zyrtec-D izy, izay fanafody tsy formulary tamin'ny 2004 rehefa nanomboka ny ady. Tsy nanao izany aho. Samy nahazo fanafody mitovy amin'ny ADHD izahay roa. Nekena ny ahy; tsy izy. Tsy nahazo fankatoavana izany raha tsy tamin'ity taona ity, rehefa nankatoavina tamin'ny varotra OTC i Zyrtec-D? Kisendrasendra? Manapa-kevitra ianao.
Kely ny tantarantsika raha ampitahaina amin'izany, saingy mitazona hatrany ny fotokevitra. Nosaronany ny famindrana ny tsokan-taolana sy ny fikarakarana azy ireo tao an-tsain'izy ireo, dia nanefa ny adidiny izy ireo hanaiky fitsaboana fanampiny lafo vidy ho an'ity zazavavy ity. Tsy isalasalana fa ny fangatahana dia nahatratra olona fantatry ny sasany (jereo ny naotiko momba ny gastroenterologist mankasitraka ny fitsaboana aretin-tsaina, ohatra), noho izany dia somary tsotra ihany ny tsia. Na dia taorian'ny fampiakarana raharaha nataon'ny mpitsabo efatra aza dia nandà izy ireo.
Michael Moore dia manana izany zo lehibe izany: ny fametrahana fanapahan-kevitra ara-pitsaboana eo an-tanan'olona hafa ankoatry ny dokotera marary dia diso fotsiny. Ary ho an'ireo antsoina hoe 'dokotera' ao Cigna dia mila manontany fotsiny aho hoe ahoana no ampifanarahan'izy ireo ny fianianany Hippocratic sy ireo fandavana sonian'izy ireo.
Araka ny Forbes, Ny totalin'ny tambin-karaman'i H Edward Hanway dia $ 28.82 tapitrisa ary ny 5-taona dia $ 78.31 tapitrisa. Hanway dia CEO an'ny Cigna (CI) nandritra ny 6 taona ary niaraka tamin'ny orinasa nandritra ny 28 taona.
Izay no mampihavana azy.
Dec 25, 2007 ao amin'ny 2: PM PM
Mampalahelo fa ny ankamaroantsika amerikana dia mandalo fiainana matavy, moana ary faly. Mamaky momba ny loza toy izao izahay ary mieritreritra fa tsy hitranga amiko sy amin'ny fianakaviako izany. Izahay dia manandrana manambany ny dikany amin'ny eritreritra toy ny hoe "nianjera tamin'ny vakivaky izy" na "ho faty ihany izy". Tsy manadihady araka ny tokony ho izy ny mpanao gazety sy manao tatitra momba ny asa ratsy sy asan-dahalo ataon'ireo orinasa fiantohana satria maro amin'ireo mpiantoka no mandoa mpanohana ihany koa. Manana mpanao gazety toa an-dry John Stossel milalao sarimihetsika Michael Moores Sicko, volana vitsivitsy monja talohan'ny fahafatesan'i Natalines.
Mifohaza i Amerika
Mandra-pahatongan'ny fahatezerantsika rehetra sy tena anaovantsika antso, manoratra taratasy ary mampahafantatra ny hatezerantsika dia hitohy ireo fomba fanao ireo. Lazao amin'ny peninao, ny vavanao ary ny boky any am-paosinao.
Mifandraisa amin'ny kongresinao. Mandefasa mailaka amin'ny mpanao gazety tsy marina. Mifandraisa ary mandrahona ireo orinasa manao ankivy ny fanaovana ankivy an'ireo fampisehoana vaovao ireo.
Dec 26, 2007 amin'ny 9: 10 AM
Ity zavatra iray manontolo ity dia mametraka fanontaniana maro kokoa avy eo mamaly ho ahy.
Raha ny zavatra novakiako dia raha nahatratra ny famindrana izy dia mety nonina enim-bolana bebe kokoa izy. Azo antoka fa tsy ho ela velona kokoa noho izany izy. Narary tampoka izy.
Tsapako ho an'ny fianakaviana. Saingy tsy dia tapaka sy maina tahaka ny tian'ny media sasany manao azy. Raha toa ka olana mahazo azy io no miaina mandritra ny 20 taona… dia tsy misy dikany izany. Fa ny fahazoana io famindrana io, dia nitaky azy hitady fanafody fanoherana… izay mety hitondra ny hery fiarovan'ny vatana malemy ary vao mainka hiharatsy kokoa… izay mety hahatonga ny homamiadana hiely haingana kokoa. ARY ny homamiadana no terminal voalohany.
Ary handeha hiady amin'ny orinasa fiantohana ara-pahasalamana aho izao. Ka fantatro fa mety ho diso làlana izy ireo. Ary ny fitakiako dia dolara an-jatony fotsiny… na aiza na aiza akaikin'ny tarehimarika enina nipoiran'ity fanambarana ity.
Dec 26, 2007 amin'ny 9: 34 AM
Azoko antoka fa betsaka ny singa tsy hita, saingy ny fehiny ho ahy dia ny dokotera sy mpitsabo mpanampy sasany nangataka ny fitsaboana ary izy ireo dia navotan'ny orinasa Insurance. Tsy maintsy ataontsika izay tsy hitranga mihitsy.
Mirary soa amin'ny adinao! Izaho dia iray amin'ireo 'tsy voahidy vola' eto amin'ity firenena ity - matavy loatra aho ary tsy azoko samirery. (Sarona amin'ny politikany manokana ny zanako).
Dec 26, 2007 amin'ny 10: 16 AM
Matoky ny dokotera toy ny atokisako ny orinasa fiantohana aho.
Tsy hangataka fahaizana manao zavatra mifanaraka amin'ny volanao any am-paosinao va ianao?
Izany no antony ahafahanao miantso amin'ny arbitrator an'ny antoko fahatelo amin'ny fanapahan-kevitra holavina. Ka olona izay:
A. Tsy voataona amin'ny fihetsem-pon'ny fianakaviana.
B. Tsy voataona amin'ny farany ambany (mandeha amin'ny fiantohana sy ny dokotera)
Afaka mandray ny fanapahan-kevitra farany.
Tsy kisendrasendra izany fa dokotera maro dia tapitrisa no manana ny zony.
Ka raha tsy resaka lohahevitra, mety hiteny ve ianao fa manohana ny fitsaboana ara-pahasalamana manerantany?
Dec 26, 2007 ao amin'ny 2: PM PM
Faly aho nahafantatra dokotera vitsivitsy ary nampalahelo fa nahita ny fiantraikan'ny orinasa fiantohana tamin'izy ireo. Ny iray amin'ireo namako dia noterena 'handany fotoana kely kokoa' amin'ny marary tsirairay hanatsara ny 'famokarany'. Nahita azy nandany 1/3 tamin'ny karamany tamin'ny fiantohana asa ratsy ihany koa aho (indostria mahasoa iray hafa).
IZY koa dia tokony hiditra ao amin'ny vondrona dokotera fa tsy hanana fanazaran-tena manokana satria tsy misy fomba ahafahany manaraka ny taratasin'ny fiantohana. Tena nahakivy fo izany satria dokotera nahafinaritra izy ary tsy mendrika ny hohajaina ao amin'ny sehatry ny fitsaboana.
Heveriko fa ho hitanao fa ny ankamaroan'ny dokotera dia tsy olona an'arivony tapitrisa ary vao mainka mandao ny fitsaboana ny marary noho ireo hadisoana rehetra tokony hatrehin'izy ireo. Misafotofoto.
Re: Fikarakarana ara-pahasalamana manerantany
Nipetraka tany Canada nandritra ny 6 taona aho ary tena manohana ny fitsaboana ara-pahasalamana manerantany (mampihoron-koditra ny fitaizako nentin-drazana). Tsotra ny antony - Mino aho fa olana ara-tsosialy ny fitsaboana fa tsy orinasa… na dia tany Etazonia aza dia nataonay orinasa BOOMING io.
Kanada dia manana ny fanambiny, hanaiky aho. Ny tantara mahatsiravina henontsika eto dia vitsy ary eo anelanelany.
Mino aho fa misy tombony lehibe amin'ny fandraharahana ara-pahasalamana ihany koa - tsy matahotra ny hanomboka ny orinasany manokana ny olona rehefa tsy mila miahiahy momba ny fahasalamana ho an'ny fianakaviany izy ireo. Tsy matahotra ny hiala amin'ny asa ratsy koa ny olona, ​​ka hihatsara ny toe-piainan'ny asa.
Heveriko fa dingana ambony izany. Rehefa dinihina tokoa, raha afaka mandoa $ 28 tapitrisa isan-taona ny CEO iray an'ny fiantohana, misy ny fotoana mety hisorohana streamline, sa tsy izany?
Tsia. Raha hitanao ny manome 33% bebe kokoa ny vola miditra amin'ny fanjakana ho fiantohana… mandrosoa. Saingy amin'izao fotoana izao dia… 250 $ / volana isam-bolana no andoavako fiantohana ara-pitsaboana (tena tsara). Na dia mandoa be aza ny mpampiasa ahy. Saingy ampahany amin'ny fampiasana mpandrindra izany.
Ny mahatsikaiky dia efa mandoa izany isika, na izany aza, ck. Rehefa tsaboina ny olona iray tsy misy fiantohana dia aloanao amin'ny haba izany amin'ny alàlan'ny hetra sy amin'ny fiakaran'ny tahan'ny fitsaboana, sns. Efa mandoa ny fikarakarana ara-pahasalamana manerantany izahay… fa fitsaboana ihany io fa tsy fanafody fisorohana.
Dec 26, 2007 ao amin'ny 4: PM PM
Mikasika ny hevitrao fa i Nataline dia nanana enim-bolana AMIN'NY famindrana - tsy marina. Raha tsy nisy ny famindrana dia nomen'izy ireo azy enim-bolana ivelany. Ny famindrana ny tsoka dia nahomby tamin'ny famongorana ny leukemia fa ny vidiny dia ny fahasimban'ny atiny izay tsy azo sitranina. Raha efa nahazo ilay famindrana izy, dia afaka nanantena fiainana iray manontolo. Raha tsy nisy izany dia voaozona izy.
Potika tanteraka ny rafitra rehefa tsy mahay intsony ny dokotera. Raha tsy matoky azy ireo ianao, dia angamba noho izy ireo nampiasa fanafody fiarovan-tena izay nahafa-po azy ireo ilay mpiantoka, ilay marary ary mandeha an-tsokosoko ihany koa ny risika amin'ny fiantohana.
Ny fanitsiana ny rafitra dia midika famerana ny mari-pankasitrahana fahasimbana sy ny antony fitakiana andraikitra, famerana ny tombom-bidin'ireo mpiantoka ary averina eo am-pelatanan'ny olona nandoa vola $ 100K ho an'ny fianarany amin'ny maha dokotera azy ireo. Tokony hamaky ny andian-dahatsoratra Dr. Kirschenbaum momba ny dokotera, vola ary fanafody ianao amin'ny fomba fijery hafa. Manomboka eto.
Ny zavatra rehetra novakiako dia toa nanondro tanjona ho an'ny famindrana ny atiny dia vintana 65% hiaina enim-bolana hafa.
Izao araka ny voalazan'ny lahatsoratro voalohany, raha toa ka afaka nanao fiainana 20 taona lasa izany… izany rehetra izany. Fa raha enim-bolana… Tsy hitsambikimbikina handray fanapahan-kevitra roa aho. Ary hieritreritra ve fa ny mpitsara ny antoko fahatelo dia vahaolana mitombina.
Ary na dia olan'izy ireo aza izany, heveriko fa tsy ny fanitsiana izany dia ny fikarakarana ara-pahasalamana manerantany, izay mampiakatra ny enta-mavesatra ho an'ny governemantanay fotsiny ary mitsentsitra izy ireo.
Ny fanitsiana dia, araka ny noresahinao… mametra ny fahasimbana amin'ny asa ratsy sy ny lalàna hafa. Fa azo antoka fa tsy hametraka ny fitantanana fiantohana ara-pahasalamana hoatran'i Hillary Clinton aho. Mazava ho azy, manana olana ampy amin'ny vola andaniako ny volako amin'ny hetra… tsy mila mandoa vola amin'ny 'olana ara-pahasalamana' toy ny asan'ny orona.
Dec 26, 2007 ao amin'ny 8: PM PM
Isaky ny lahatsoratra Associated Press ao amin'ny http://ap.google.com/article/ALeqM5hFp8DsNC_gJwb9q72kNfDiZCioSwD8TM2SAO1, ny dokotera ao amin'ny UCLA dia voatonona fa «… ny marary amin'ny toe-javatra mitovy amin'i Nataline izay mandeha transplantation dia manana taham-paharetana enim-bolana eo amin'ny 65 isan-jato."
Ny azoko fa ny dikan'izany dia ny hanana 65 isanjato avanoa ho tafavoaka velona amin'ny 6 volana voalohany izy, fa tsy, araka ny nomarihinao, fa ho faty amin'ny 6 volana ihany. Narary mafy izy satria tsy nahomby tamin'ny atiny vokatry ny fitsaboana leukemia. Ny fahalalako azy dia raha nahavita 6 volana izy, dia nanana ny fotoana rehetra nanatanterahana an'io nandritra ny taona maro.
Raha ny fahitako azy tsara dia avy amin'ny lahatsoranao fa mino ianao fa ny fikarakarana ara-pahasalamana izay mety hahasoa dia tsy tokony ho an'izay afaka mividy izany, ary ny olon-kafa rehetra dia tsara kokoa noho ny maty fotsiny. Manaiky ny hevitrao sy ny sosokevitrao aho; Heveriko fa ny arbitration an'ny antoko fahatelo dia hevitra tsara, indrindra fa raha haingana, fa ny fiheveranao ny hoe "mety hamela azy ho faty, handeha ihany izy" na izany aza dia somary mavitrika. Manome ny fiheverana fa ny tenanao ihany no mahaliana anao fa tsy ny olon-kafa.
Tiako ny rehetra hiaina sy hanana fidirana amin'ny fiantohana ara-pahasalamana, na izany aza tsy heveriko fa toeran'ny governemanta izany.
Aleoko mahita governemanta kely kokoa (izany hoe, ahena ny IRS), tsy ny betsaka amin'izany.
Ahoana araka ny eritreritrao no nanaovan'ireo razambentsika mpanorina azy io? Ny valiny dia ny hampihena ny enta-mavesatra amin'ny dokotera (izany hoe fitoriana ara-dalàna) fa tsy hamindra izany enta-mavesatra izany amin'ny mpandoa hetra rehetra. Ny governemantantsika dia voaporofo fa tsy mahay ary tsy tokony hatokisana amin'ny androm-piainantsika koa. Miaraka amin'izy ireo no tompon'andraikitra, ny tranga toy izao dia ho lasa mahazatra kokoa, ary tsy dia kely loatra. Jereo fotsiny ny tahan'ny tahan'ny tsy fahombiazan'ny fo sy ny homamiadan'ireo izay voan'ny homamiadana. Ny fitsaboana manokana dia mandaitra kokoa.
Fa raha ny amin'ilay tranga efa akaiky dia avelao aho hiteny indray .. raha ny vinavina dia mety haharitra lava aorian'ny famindrana… dia izany rehetra izany no hataoko. Saingy novakiako tamin'ny fomba ratsy ilay fanambaranao notondroinao.
Tena te-hahita lahatsoratra voasoratra tsara, ny lahatsoratra momba ny zava-misy fotsiny ao.
Tsy lohahevitra mora io ary tsy tokony hiadian-kevitra amin'ny ady hevitra mampihetsi-po. Ny zava-misy marina reny.
Jan 10, 2008 ao amin'ny 1: 35 AM
Tsotra ny zava-misy, Cigna dia tsy te handany fanasitranana aretina, mitovy amin'ny nataon'i Cigna Glendale tamin'ity Fianakaviana ity, niady tamin'ny fomba rehetra azony natao izy ireo, mba hahitana ireo masoivohon'ny governemanta mamela ireo olona ireo hanararaotra ny mpanjifa, ary tsy misy vita. Voasarona.
Kongresista avy any Valencia, California Writes
Nanoratra ny Kongresy: Tamin'ny taratasy tamin'ny 30 Mey 1996 tany amin'ny Dept of Corporations. Kopian'ny taratasy natolotra an'i Jo Joshua Godfrey.
Andriamatoa Komisiona malala,
Manoratra amin'ny anaran'ny mponiko Josephine Joshua Godfrey aho izay niaina zava-tsarotra mafy niaraka tamin'ny fitsaboana HMO nahazo alalana tany California, CIGNA Health care.
Andriamatoa Godfrey calims CIGNA dia tsy nahomby tamin'ny familiana sy ny fitsaboana ny homamiadan'ny havokavony nanomboka ny volana martsa 1993 ka hatramin'ny aogositra 1994. Toa herintaona taty aoriana dia fantatry ny mpitsabo tsy ho Cigna fa misy ny fivontosan'ny Carcinoid ao amin'ny havokavony ankavia ary nilaza tamin'Andriamatoa Godfrey ny fivontosana dia tokony ho voamarina tamin'ny fiandohan'ny taona 1993. Na eo aza ny fandavana miverimberina ny fisian'ny fivontosana avy amin'ny CIGNA, ny fivontosana dia nesorina tao amin'ny ST. Hopitaly Josephs any Burbank California. Nisy valan-javaboary taorian'ny fandidiana nilaza fa “lehibe tanteraka… matotra tanteraka ny fivontosana.
Nandritra ny fanadinana nataon'ny GIGNA, Andriamatoa Godfrey, dia nangataka matetika hanatona mpitsabo manokana momba ny fitsaboana. Noho ny antony tsy hay hazavaina dia tsy nety nanontany mpitsabo manokana momba ny fitsaboana sahaza azy ny GIGNA. CIGNA dia nandà ihany koa ny famoahana ireo rakitsoratra ara-pitsaboana an-dRamatoa Godfrey mba hahafahan'ny dokotera hafa mandinika ny tantaram-pitsaboana sy ny fitsaboana azy. Taorian'ny fangatahana am-polony vao navoaka ny firaketana. Na izany aza, Andriamatoa Godfrey dia mino fa hiarovana ny CIGNA amin'ny tsy fanao ratsy dia novaina tamin'ny fomba ratsy ireo antontan-taratasy.
Ny fanjakana Kalifornia dia manana andraikitra hiaro ny mpanjifa voasoratra ao amin'ny HMOS. Ny fanjakana dia takiana amin'ny fanabeazana sy fampahafantarana amin'ny mpanjifa ny momba ny HMOS. Miaraka amin'ny 12 tapitrisa Kaliforniaana ao amin'ny HMOS ny mampianatra sy mampahafantatra ny mpanjifa ny kalitao sy ny fidirana amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana dia andraikitra lehibe. Mampalahelo fa raha ny zavatra niainan'Andriamatoa Godfreys dia famantarana ny fomba itondran'ny HMOS ny filan'ny mpanjifa dia tsy maintsy dinihinay ny rafitry ny fikarakarana. Nanomboka nanadihady ny HMOS ny kongresy sy ny kalitaon'ny fitsaboana omen'izy ireo. Betsaka ny marary no mino fa mandà ny fikarakarana sy ny fampahalalana matetika amin'ny marary ny HMOS mba hampihenana ny vidiny. Ny "fitsipika gag" mazava ho azy izay mandrara ny dokotera tsy hanome sosokevitra ny fitsaboana izay tsy nihoaran'ny HMO dia mampanahy manokana ihany koa.
Tsy ny mponiko irery no nanana olana tamin'ny fifandraisan'ny HMO.
(1) Nodimandry i Ruth Macinnes avy any San Diego rehefa tsy nahavita nanao fitiliana ara-pitsaboana mba hahitana aretina sy hitsaboana aretim-po ny mpitsabo HMO; (2) Niady ho an'ny fiainany ny homamiadan'ny lymphoma tsy Hodgkins non-Hodgkins -Famaritana mandritra ny herintaona mahery. Nolazaina tamiko fa toy ireo olona ireo dia misy an'arivony maro hafa manerana ny firenena manana tantara mitovy amin'izany.
Maneho fanajana am-panajana ahy ny biraonao manadihady ireo fitakiana ireo, ary manadihady raha toa ka omena vola araka ny tokony ho izy ny HMOS an'ny fanjakana ary omena ny mpanjifa ny fampahalalana ilain'izy ireo hiantohana ny fitsaboana tsara. Mino aho fa Ramatoa Godfrey dia nampijaliana mafy tamin'ny rafitra iray izay tokony hikarakara azy. Raha misy sarona ny fanitsakitsahana dia mangataka aho mba horaisina ny fepetra fampiharana an'ireo tompon'andraikitra amin'ny fampijaliana mpanjifa. Ny fanadihadiana feno dia hanampy amin'ny fanatanterahana ny adidiny amin'ny mpanjifa HMO maherin'ny 12 tapitrisa. Azafady mba valio ny Diretor ao amin'ny distrika misy ahy, Armando E. Araloza amin'ny alàlan'ny fanoherana voalohany anao.
Ny valin'ny departemantan'ny Corp.
Los Angeles, CA Mamaly »
JO JOSHUA GODFREY Mizara amin'ny VAHOAKA KALIFORNIA SY Ity Firenena ity:
NY DEPARTEMAN'NY CORPORATIONS RESPONSE AN'NY KONGRESSMANS Taratasy daty 2 JOLAY 1996
Ry kongresista malala,
Nahazo ny taratasinao tamin'ny 30 Mey 1996 aho, voaray tamin'ny 4 Jona 1996, momba ireo olona voalaza etsy ambony ireo sy ny drafitr'asan'izy ireo momba ny fahasalamana, Cigna Healthcare any California.
Ny sampan-draharahan'ny orinasa (? Departemanta?) Dia mifehy ny drafitra fikarakarana ara-pahasalamana Cigna sy ny drafitra fikarakarana ara-pahasalamana hafa araka ny lalàna momba ny drafitry ny fikarakarana ara-pahasalamana Knox-Keene (kaody momba ny fahasalamana sy ny fiarovana 1340 sy ny manaraka.) .). Ny Sampan-draharaha dia mandray ny fangatahana fanampiana tsirairay avy (? RFA?) Raisinay am-pahamatorana. Ny RFA voarain'ny Sampan-draharaha dia dinihina tsy ny fanajana ny olan'ny tsirairay ihany, fa ny mason'izy ireo manoloana ireo olana mety hitranga amin'ny rafitra. Ny fandinihana ny RFA dia singa iray manandanja amin'ny ezaky ny lalàna mifehy ny departemanta.
Ny departemanta dia nandinika na nandinika ireo RFA rehetra natolotry ny fianakaviana Godfrey. Ny raharaha Josephine Godfrey dia nodinihan'ny Sampan-draharahan'ny Fampiharana an'ny departemanta. Ity famerenana ity dia nahitana, saingy tsy voafetra tamin'ny, amin'ny alàlan'ny fandinihana ireo rakitsoratra ara-pitsaboana mifandraika amin'izany, fanadihadiana miaraka amin'ireo mpiasan'ny drafitra ary fifanakalozan-kevitra lehibe miaraka amin'ny fianakavian'i Godfrey. Vokatr'ity famerenana ity dia tapa-kevitra ny Division Enforcement fa Cigna dia niteny tamim-pahamendrehana ireo fitarainana manokana nataon'i Ramatoa Godfrey ary namolavola paikady hamahana ireo olana ireo.
Mikasika ny RFA an'i Christopher Godfrey, nanaiky i Cigna hanana RN (Anaran'ny individualuaL Nesorina) ho an'ny Andriamatoa sy Ramatoa Godfrey hanampy azy ireo amin'ny fandrindrana ny fikarakaran'izy ireo ankehitriny sy hamahana izay olana mety sendra azy ireo. Samy nikatona ireo RFA roa ireo. Na izany aza, ny fampahalalana ao amin'ireto sy ny RFA rehetra dia tafiditra ao anatin'ny lalàna mifehy ny Sampan-draharaha mba hiantohana ny fanajana ny drafitry ny fahasalamana amin'ny lalàna Knox-Keene.
Mizara ny ahiahinao momba ilay antsoina hoe? Gag? andalana ao amin'ny fifanarahana mpamatsy. Vao haingana ny sampana dia nitaky drafitra hamafana fehezan-dalàna ao amin'ny fifanarahana mpamatsy azy izay nanery ny mpamatsy hametraka ny drafitra amin'ny "mazava tsara." Tamin'ny fifampiresahana vao haingana tamin'ny rehetra manana fahazoan-dàlana dia nilaza ny Sampan-draharaha hoe:? Ny dokotera mpifaninana tsirairay sy ny mpitsabo hafa dia tokony ho afaka miteny marina tsara momba ireo raharaha izay mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny marary iray sy ny finiavany hampiorina ny fifandraisan'ny fitokisana. fahatokisan-tena eo amin'ny marary sy ny mpitsabo matihanina.?
Eto am-pamaranana dia tiako ny manantitrantitra indray ny fanoloran-tenan'ny Sampan-draharaha amin'ireo Kaliforniaana an-tapitrisany maro nisoratra anarana tao amin'ny drafitra fikarakarana ara-pahasalamana. Raha manana fanontaniana fanampiny ianao, azafady Aza misalasala mifanerasera amin'ny Mpanampy Manokana (Nomena An-tsinontsinona) Am-pahatsorana,
Jan 10, 2008 ao amin'ny 1: 42 AM
Nanoratra ity tantara ity tamin'ny mpanao lalàna aho tamin'izaho 14 taona, ary tiako hizara izany aminao.
14 taona aho ary iharan'ny tsy fanjarian-tsakafo. Manoratra amin'ny Kongresy sy ny Antenimieran-doholona aho satria mila manampy ireo tratry ny tsy fanao ara-pahasalamana ianao. Narary aho, narary ny lohako ary nentin'ny reniko tany amin'ny dokotera aho. Narary matetika ny oroko ary narary an-doha. Heveriko fa nanomboka tamin'ny faran'ny taona 1992 na tamin'ny fiandohan'ny taona 1993. Nilaza izy ireo fa tsy maninona aho, ary tadidiko fa dokotera iray dia tena ratsy toetra taminay sy mamanay; tsy te hiresaka momba izany akory izy. Nilaza izy fa ao an-tsaiko daholo izany, fa tsy maninona aho. Ny taona 1993 sy 1994 dia tsy taona nahafinaritra tamin'ny fiainako. Tsy faly aho. Narary foana ny reniko, mikohaka foana eo am-pandriana, mandeha mankany CIGNA foana hahazo fanafody, reraka loatra foana. Tsy toy ny reniko intsony ny reniko; narary sy maty ny lohako, ary reraka aho tsy nanelingelina ny reniko satria hitako fa narary izy. Ketraka foana izy, nitomany foana, ary tezitra sy mikohaka foana. Hiantsoantso aho hanampenam-bava amin'ny alina ary tazominy hiambina isika rehetra, izao dia mahatsapa ho ratsy.
Tamin'ny volana febroary 1994, ketraka aho, narary ny lohako, ary naka pilina tamin'ny kabinetran'ny fanafody aho, tsy vao sambany nanao an'io aho, nefa marary ny reniko fa tsy hitany akory. Isaky ny naka bebe kokoa aho ary indray andro dia niditra ny reniko mba hanaitra ahy ary tsy te hifoha aho, reraka loatra aho. Nilaza ny reniko fa izany, miakanjoa; handeha ho any CIGNA avy hatrany isika. Nandeha tany aho ary nahita ahy ny dokotera CIGNA. Nandefa ahy tany amin'ny toera-pahasalamana ara-tsaina izy ireo ary na ireo toerana roa ireo aza tsy nahafantatra izay nataoko. Nandeha ahy ny reniko ary notantaraiko azy ny zavatra nataoko. Taty aoriana tamin'io andro io dia nilaza izy hoe ahoana no fomba hiainany raha maty aho. Ny reniko nitomany satria reraka be izy dia nanome tsiny ny tenany satria tsy ampy ny nataony. Nampanantena ny reniko aho fa tsy hanao izany intsony. Niantso an'i CIGNA ny reniko ary sosotra tamin'ny tsy fahitan'izy ireo ahy fa nanandrana namono tena aho, nanontany azy ireo hoe karazana dokotera iza izy ireo. Nikiakiaka mafy ny reniko fa nanaiky hanome ahy vatana feno izy ireo. Tamin'ny fizika ara-batana tamin'ny fiandohan'ny volana martsa dia nitaraina be momba ny lohako aho nanaiky hanao scan ny lohako. Naharitra roa volana sy sasany teo ho eo izany, scanner tsirairay, ary farany nilaza ny dokotera fa mila hosasana ny sinus-ko, tamin'ny faran'ny volana Mey lasa teo. Nanontany ny reniko raha maika izany, ilaina hatao dieny izao, hoy ny dokotera fa tsy maika. Nilaza ny reniko fa hataonay amin'ny fialan-tsasatra fahavaratra ity.
Narary mafy ny reniko nanomboka ny volana Mey ka hatramin'ny Aogositra. Nankany amin'ny dokotera izy ary napetrany nandritra ny 6 herinandro izy. Tamin'ny tapaky ny volana jolay dia nanofy aho fa voan'ny homamiadan'ny havokavoko ny reniko ary ho faty izy. Tezitra be ny reniko rehefa nilaza izany taminy aho. Tamin'ny voalohan'ny volana Aogositra dia nandefa ahy tany Irlandy nandritra ny iray volana i Neny mba hitsidika ireo raibe sy renibeko. Rehefa niverina avy tany Irlandy aho tamin'ny faran'ny volana aogositra dia nitabataba ny tranonay, nandritra ny 2 herinandro dia nandà ny hanome ny reniko ny ray-ny rehetra ny CIGNA milaza aminy fa very izy ireo. Vao nahazo azy ireo izy ary naneho fa voan'ny homamiadan'ny havokavoka efa ho 2 taona izy. Ny reniko dia nodidiana ary nesorina ny 20% -n'ny havokavony. Voan'ny fivontosana carcinoid izy. Rehefa tany amin'ny hopitaly ny reniko dia nilaza tamin'ilay raikeliko ilay dokotera fa tsy salama koa izy. Ary niafara tamin'ny nandavan'ny CIGNA hamoaka ny rakitsoratry ny raikeliko mandritra ny 2 herinandro. Rehefa nankany amin'ny dokotera ivelany izy ireo dia efa notsaboin'ny CIGNA ho an'ny asma; tena manana tranga COPD tena mandroso izy ary nanana zavatra teo amin'ny havokavony havia toa ny reniko.
Nandeha izahay naka ny firaketana ho an'ny fianakavianay rehetra. Rehefa nahita ny ahy aho, ary nandeha tany amin'ny dokotera tany ivelany, taorian'ny fandehanan'ny dokotera tany ivelany dia fantatro izao ny mahasamihafa ny dokotera tena izy sy ny dokotera CIGNA, ary manantena aho fa indray andro any, hiresaka momba izany rehetra izany aho . Nanana olana aho rehefa potika ny taolana, izay nanosika ny taolana hamakivaky ny orbit, ary nilaza ny dokotera fa natosika hivoaka ny masoko. Natao fandidiana tany Cedar-Sinai aho. Ny 1995 dia tsy tsara lavitra noho ny 1993 satria toa tsy misy ny fahamarinana amin'ireo zavatra rehetra nataon'i CIGNA tamintsika ireo. Tianay ny hiova ny lalàna mba tsy hisy hijaly intsony toy izao. Ny CIGNA dia manararaotra ny ankohonantsika mandraka androany. Mampitomany an'i Neny mandritra ny ora maro izy ireo ary manantena aho fa avelanao hitantara izany rehetra izany aminao koa aho. Tokony ho fantatry ny CIGNA koa raha maty ny ray aman-dreniko, aiza no halehako, ary inona no hitranga amin'ireo rahalahiko sy rahavaviko? Amerikanina aho, ary rehefa lehibe aho dia tsy te hipetraka eto. Te hifindra any amin'ny toerana tsara sy tsara fanahy ny olona. Hifindra any Irlandy aho.
27 taona aho izao. Na izany aza dia mampalahelo fa misy fianakaviana tsy maintsy mijaly toy izao, ary ireto mpisoloky sy mpisoloky ireto dia afaka tamin'ny sazy tany amin'ny State of California.
MANKASITRAKA GLIGALE CIGNA
Mar 11, 2008 amin'ny 2: 58 AM
Fijoroan'ny loholona vavolom-panjakana hijerena ny fanjakana any California ny alatsinainy 12 mey 1997 amin'ny 2.03PM
Tonga hizara aminareo ny zavatra niainako aho. Ny Departemantan'ny orinasa dia tsy mahomby amin'ny asany ara-dalàna, ary ny zavatra niainako mianakavy dia maneho an'izany. Ary ny zavatra niainako manokana niaraka tamin'ny Cigna Healthcare dia hampiseho ny fomba fanararaotana ny mpanjifa, sy ny fomba itodihan'ny Departemantan'ny orinasa.
Ny zavatra niainako niaraka tamin'i Cigna dia natomboka tamin'ny fanararaotana nataon'ny ray aman-dreniko ary avy eo dia nataon'izy ireo izany fanararaotana natao tamin'ny mpikambana rehetra tamin'ny fianakaviako izany. Rehefa narary aho ary nila mpitsabo dia halefany any amin'ny fotoana voatondro aho, ary ho afa-baraka aho satria matetika ny dokotera izay nanirahany ahy dia tsy niandry ahy. Vokatr'izany dia nandefa taratasy tamiko i Cigna nilaza fa afaka misafidy dokotera manokana aho ary izy ireo no handoa ny fitsaboana. Nanao izany indray mandeha izy ireo ary avy eo tsy nandoa ny saram-pitsaboana, ary norahonan'ireo masoivoho mpanangona aho fa hotoriana aho raha tsy mandoa ny faktiora. Nilaza koa i Cigna fa afaka mifidy dokotera voafidiko amin'ny toerako Santa Barbara, ary tsy nisy izany. Cigna dia nanendry ahy dostor tany Santa Barbara fa rehefa narary aho ary te-hanao fotoana ary niantso ny dokotera aho dia tsy naveriny intsony ny antso nataoko. Rehefa nifandray tamin'ny biraon'ny dokotera izahay dia nilaza izy ireo fa tsy miara-miasa amin'i Cigna intsony izy ireo, satria tsy hanao referrale i Cigna rehefa ilaina ny manampahaizana manokana.
Tamin'ny taon-dasa dia nila fikarakarana manokana aho, ary nandritra ny fomba fitsaboana dia nilaza ny dokotera fa mila Biopsy aho. Tsy maintsy nijanona teo afovoany izy ary nahazo alalana avy amin'ny CIGNA hanohy. Nilaza ny dokotera fa mifamatotra ireo fomba roa ary tsy mbola nampoiziny hanao fanafody toy izany taloha. Taorian'io fomba io rehefa nitaraina tany amin'ny Departemantan'ny orinasa momba an'io Cigna aho dia nandà ireo fiampangana ary namaly fa diso ny dokotera. Hatramin'io fotoana io dia nanatona ny mpanao lalàna tao Santa Barbara ny dokotera ary nilaza izy fa nanao ny Biopsy nefa tsy nahazo alalana tamin'izy ireo, ary marina ny kaontiko momba ilay tranga. Nilaza ny dokotera fa mila fanaraha-maso isaky ny 90 andro aho satria izany dia aretina alohan'ny homamiadana. Nilaza i Cigna fa raha mila an'ity fikarakarana manokana ity aho dia mila mandalo amin'ny dokotera voalohany mba hahazoana antoka fa mila izany aho, ary izy ireo kosa nanendry mpitsabo voalohany tao Santa Maria, tsy tao amin'ilay faritany iray ihany, ary mihoatra izany adiny iray izany avy amin'ny toeram-ponenako.
Mpianatra handeha ho any UC Santa Barbara aho, ary tsy manana fitaterana. Tsy safidy azo atao izany., Ary ny Departemantan'ny orinasa fa tsy manampy ahy, dia nasain'ny olona tao amin'ny Cigna tompon'andraikitra tamin'ny fanorisorenana ahy sy nanakana ny fitsaboana ahy.
May 12, 2008 ao amin'ny 8: 38 PM
Rehefa avy niray hina nandritra ny taona maro ny orinasako dia nivadika CIGNA. Vao tsy ela akory izay dia tsy maintsy nanana MRI teo an-damosiko aho ary nolazaina tamin'ny DR.s SEcretary CIGNA dia tena ratsy ny manome alalana na inona na inona. Naharitra 5 andro ny fankatoavana azy, saingy Rehefa avy nangataka ara-bakiteny ny dokoterako. Nolazaina ihany koa aho fa na dia ankasitrahan'izy ireo aza ny fomba fiasa, dia mihodina izy ireo indraindray ary mandà fa nilaza izy io fa tsy nahazo alalana tamin'ny famaritana azy ireo, ary ianao dia mifikitra amin'ny volavolan-dalàna. antso avy amin'ny CIGNA tonite hijerena raha te-hiantso ny "NURSE IREO" ho an'ny olana amin'ny havokavoka, fona, lamosina na taolana amin'ny ho avy aho fa tsy mankany amin'ny PCP-ko !! Nolazaiko tamin'izy ireo fa tsy mahazo aina aho rehefa "hita" an-telefaona ary misaotra anao ihany koa. Tena sosotra izy nilaza fa tsy nitsambikina tamin'ny tolotra.
Matahotra mafy aho ny amin'ny olana ara-pitsaboana amin'ny ho avy tadiaviko indrindra fa manana 7 taona aho, ary ny CIGNA dia toa orinasa tsy miraharaha rehefa avy namaky ny fanehoan-kevitra. Tsy afaka mivavaka fotsiny aho fa ho salama daholo isika, satria ny CIGNA dia mivoaka ho an'ny denaria fa tsy ny marary !!!! Izany dia nazava tamiko tao anaty 1 herinandro monja !!!!!!!!!!!
fako omaly hariva
1 Okt 2008 amin'ny 6:18 PM
Miasa amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe miaraka amin'ny cigna ho ins aho. vaky ny lamosiko tany am-piasana, teo am-piasana, niditra ara-potoana. hoy ity mpitantana «hanger» ity amiko fa ity dia "TSY AMIN'NY FAHASALAM-PANJAKANA" !!
very ny ins "kilemaina maharitra" nandritra ny cigna. Eny, izy ireo - cigna dia naniraka ahy tamin'ity vehivavy janga ity tamin'ny fitsaboana ara-batana izay nilaza tamin'ny cigna izay zavatra tian'izy ireo ho re. Noho izany, miondrika eo an-damosiko aho tsy misy fanampiana ary mijaly amin'ny tsy mahazo vola. iza no manana ny valiny ary raha misy te hanana nomeraon-telefaona hiantsoana ahy, satria ny olona mandalo dia mila manana isa isa hiantsoana aho, izany rehetra izany dia tsy nanampy fa ny zazalahy ve manana nomeraon-telefaona !!
amin'ny famaranana, oroka ny borikiko ho an'ireo izay mihatra, ho an'ireo izay tsy maninona, miala tsiny amin'ny fanaintainanao sy ny ainao very aho
7 Okt 2008 amin'ny 1:14 PM
Ny reniko dia nodimandry nandritra ny 11 taona ary i Cigna no fiantohana nananany fony izy tany amin'ny hopitaly noho ny Flu. Rehefa afaka fotoana fohy dia nanjary niharatsy izy raha mbola tany amin'ny hopitaly, fa tsy ny fitsaboana tsara kokoa dia nitsidika vehivavy iray niasa tamin'ny hopitaly izahay ary nilaza taminay sy ny reniko fa tsy maintsy mody aho satria tsy handoa vola i Cigna intsony ny fijanonany. Vao 55 taona ny reniko rehefa nandroaka azy tany ivelan'ny hopitaly i Cigna. Tsy fantatray fa ny Cigna izay tokony ho fantatra noho ny firaketana ara-pahasalamana dia tsy maintsy nalefa tany amin'izy ireo raha misy karazana fandoavam-bola any amin'ny hopitaly izay nikatona tao anaty tsinay ny reniko ka izany no antony nandehanan'ny rà avy tany an-tavy ary tsy afaka. Mijoroa irery rehefa nilazana izy fa nilaza i Cigna fa tsy handoa fitsaboana intsony izy ireo. Ny reniko dia niverina tao anatin'io herinandro io tany amin'ny ER ka narary mafy ka tsy zakan'izy ireo ny rany satria ho faty izy avy eo ka napetraka tao amin'ny ICU ary avy eo dia fantatray fa niraikitra tao amin'ny tsinainy izy. mila fandidiana izy fa satria tsy vita vetivety dia nosokafana ho voa izy saika ny tsinainy rehetra avy tao amin'ny tsinay nipetraka teo fotsiny satria tsy fantatry ny reniko hoe manana an'io izy fa Cigna kosa no nanipy azy tany ivelan'ny hopitaly. Napetraka tamin'ny ainy izy avy eo ary latsaky ny 7 andro taty aoriana 18 andro talohan'ny nahatongavako 21 taona dia tsy maintsy nanao sonia aho fa nesorina ny reniko satria tsy nisy fanantenana intsony noho ny hafaingan'ny fielezan'ny aretina raha mbola teo izy. nivoaka ny hopitaly. Antsoy hoe inona no tianao fa famonoana olona raha vola na fiantohana marina no tokony hamelona ny reniko fa satria manana CIGNA HMO izy ireo dia nanapa-kevitra izy fa tsy mendrika ny aloa. Mbola 11taona aty aoriana dia mbola manontany tena ihany aho hoe firy hafa no maty teny an-tànany.
Jun 21, 2009 ao amin'ny 3: 10 PM
Jo Joshua Godfrey izay nijaly tamin'ny sigara dia nanangana United Patients Of America.